किन प्रार्थना गर्नुपर्छ? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश तामिल तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
किन प्रार्थना गर्नुपर्छ?
यहोवा परमेश्वर हामीले आफ्नो चिन्ताबारे धक नमानी उहाँसित कुराकानी गरेको चाहनुहुन्छ। (लूका १८:१-७) उहाँ हाम्रो चासो राख्नुहुन्छ, त्यसैले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो बुबाले प्रार्थना गर्न मायालुपूर्वक निम्तो दिनुभएको छ। उहाँको यो निम्तो खुसीसाथ स्वीकारे कसो होला?—फिलिप्पी ४:६ पढ्नुहोस्।
प्रार्थना गर्नु भनेको मदतको लागि बिन्ती गर्नु मात्र होइन। बरु प्रार्थनाले हामीलाई परमेश्वरको नजिक हुन मदत गर्छ। (भजन ८:३, ४) हामीले नियमित रूपमा आफ्नो भावना परमेश्वरलाई पोखायौं भने उहाँ हाम्रो घनिष्ठ साथी बन्नुहुनेछ।—याकूब ४:८ पढ्नुहोस्।
प्रार्थना कसरी गर्नुपर्छ?
प्रार्थना गर्दा हामीले बनावटी शब्दहरू प्रयोग गरेको वा कण्ठ गरेको प्रार्थना दोहोऱ्याएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। हामीले कुनै विशेष आसन धारण गर्नु पनि आवश्यक छैन। यहोवा परमेश्वरले हामीलाई मनैदेखि प्रार्थना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। (मत्ती ६:७) उदाहरणको लागि पुरातन इस्राएलमा हन्ना नामकी स्त्रीले आफ्नो पारिवारिक समस्याबारे प्रार्थना गरेकी थिइन्‌। पछि तिनको पीडा खुसीमा परिणत हुँदा तिनले मनैदेखि प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइन्‌।—१ शमूएल १:१०, १२, १३, २६, २७; २:१ पढ्नुहोस्।
हामीले साँच्चै ठूलो सुअवसर पाएका छौं। हामी सृष्टिकर्तालाई आफ्नो मनको पीडा पोखाउन सक्छौं। उहाँको प्रशंसा गर्न अनि उहाँले गर्नु भएका कामहरूका लागि धन्यवाद दिन सक्छौं। आफूले पाएको यस्तो बहुमूल्य सुअवसरलाई बेवास्ता नगरौं।—भजन १४५:१४-१६ पढ्नुहोस्।
प्रार्थना विश्‍वास र उपासना
प्रार्थना गर्न पाउनु हाम्रो लागि ठूलो सम्मान
के परमेश्‍वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्‍नुहुन्छ? यो प्रश्‍नको जवाफ थाह पाउन तपाईँले प्रार्थनाबारे बाइबलले के सिकाउँछ, बुझ्नुपर्छ।
आवरण लेख परमेश्वरले दुष्टता र दुःखकष्टलाई के गर्नुहुनेछ
के हामी अदृश्य परमेश्वरलाई देख्न सक्छौं?
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा जुलाई २०१४ | असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?
जुलाई २०१४ | असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?
प्रहरीधरहरा जुलाई २०१४ | असल मानिसहरूले दुःख पाउँछन्‌, किन?